လျော့နည်းသည် - ကြာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကင်းသုံးစွဲနိုင်သည့်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုသည်မက်လုံး - အကင်းပါးပါးနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (2016) - Your Brain On Porn
ဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်ပါသည်: ကြာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမက်လုံးပေး-sensitive နှင့်စွဲတူသောအပြုအမူ (2016) ကိုထုတ်လုပ်
Psychopharmacology (Berl) ။ 2016 Oct;233(19-20):3587-602. doi: 10.1007/s00213-016-4393-8.
Kawa AB1, Bentzley BS2, ရော်ဘင်ဆင် TE3.
စွဲတူသောအပြုအမူထုတ်လုပ်ရန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပမာဏကိုတိုးမြှင့်အပေါ်ကိုကင်းစွဲအာရုံ၏ခေတ်ပြိုင်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ သို့သော်အခြားအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်လူသားများတွင်အတွင်းနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏အကြိမ်ကြိမ်အကြားနှစ်ဦးစလုံး, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောစားသုံးမှု၏ယာယီပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ဤပုံစံကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကိုကင်းကို (စုစုပေါင်းရက်ပေါင်း ၇၀) ကာလကြာရှည်စွာအသုံးပြုခွင့်ကိုပေါင်းစပ်ထားသော (IntA) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့ပြီးကိုကာကိုင်းအတွက်လှုံ့ဆော်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုတွက်ချက်ရန်အပြုအမူဆိုင်ရာစီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
IntA စားသုံးမှု၏တင်းမာမှု, တစ်ဦးကိုကင်းဝယ်လိုအား (မက်လုံးပေး-sensitive) တွင်တိုးတက်သောတိုးနှင့်ကြံ့ခိုင် drug- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းစွဲတူသောအပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကွဲပြား (ရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံ vs. [STS] [GTs] sign-ခြေရာခံ) သူတို့၏ propensity အတွက်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းကြွက်တွေကိုဆုချဖို့မက်လုံးပေး salience attribute မှရှိမရှိမေးခဲ့တယ်။ STS ကန့်သတ်မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်ကင်းယူဖို့ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်ကြပေမဲ့, IntA ပြီးနောက်, STS နှင့် GTs မရှိတော့စွဲတူသောအပြုအမူမဆိုအတိုင်းအတာအပေါ်ကွဲပြားပါတယ်။
စားသုံးမှုပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်း၊ မက်လုံးပေးခြင်းနှင့်အခြားစွဲလမ်းသည့်အပြုအမူများပိုမိုဆိုးရွားစေရန်ကိုကင်းပမာဏကိုထိတွေ့ရန်မလိုအပ်ပါ။ (IntA သည် 'ရှည်လျားသောလက်လှမ်းမီ' လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထက်စုစုပေါင်းကိုကာကိုလာသုံးစွဲမှုလျော့နည်းစေသည်)။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ ST phenotype STS (ဖြစ်ကောင်းအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီအန္တရာယ်မှာ) မက်လုံးပေး-sensitive မှမူလကပင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်ဤ phenotype မက်လုံးပေး-sensitive သူတို့ကိုအောက်, ဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအားပေးအားမြှောက်သောကွောငျ့မဟုတ်သောကွောငျ့, စွဲဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် IntA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ဆက်စပ် pharmacokinetics စွဲတူသောအပြုအမူတစ်ခုအရေအတွက်ကိုထုတ်လုပ်အတွက်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောဖြစ်ကြပြီးဆက်စပ် neuroadaptations လေ့လာနေနှင့်အားနည်းချက်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲအကဲဖြတ်ဘို့တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်နိုင်သည်။
KEYWORDS: စွဲ; အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒ; ကိုကင်း; ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို; လှုံ့ဆျောမှု; sign-ခြေရာခံခြင်း